रोम मा Palatine कसरी: फोटो
रोम मा Palatine - सातौं को नाम, र इटालियन राजधानी मा उच्चतम पहाड को छ। यो चालीस मिटर पहाडी अतिप्राचीन समय देखि Inhabited गरिएको छ। दन्त्यकथा यो स्थान मा पौराणिक ब्वाँसो suckled कि उनको दूध Romulus र Remus, प्राचीन स्थिति स्थापित गर्ने जुम्ल्याहा दाजुभाइ भन्छन्। यहाँ बाट "अनन्त शहर" को कथा सुरु भयो। त्यसैले, तपाईं पुरातन भग्नावशेष र रोमान्टिक दन्त्यकथा चाहनुहुन्छ भने, यो भ्रमण निश्चित हुन। अधिक भनेर पुरातन mythical स्थानहरूको लगभग सबै पछि पुरातात्विक उत्खनन द्वारा पुष्टि गरेका थिए। आज हामी यो पौराणिक स्थानको भर्चुअल भ्रमण लिन।
प्राचीन समयमा हिल को इतिहास
रोम मा Palatine जहाँ "अनन्त शहर" बनाइएको थियो ठाउँ छ। Romul म REM यहाँ वृद्धि र हुर्केका छन् Faustulus। पौराणिक कथा अनुसार, पहिलो ढुङ्गा पनि Palatine मा राखिएको थियो। तर इतिहासकारहरूले यो प्राचीन पहाडी मूल गाई grazed भन्ने विश्वास गर्छन्। कुनै आश्चर्य हिल नाम को एटिमोलजी फिर्ता देवी Pales गर्न तिथिहरु। त्यो गाई को protectress थियो। सायद, समय यसलाई देवी गर्न बलिदान लागि वेदीहरू ठाडो गर्न थाले। रोमी पहिलो यहाँ बसोबास गर्न थाले, तर अन्य छ पहाड मा पछि बस्थे। प्राचीन समयमा हिल साम्राज्य को केन्द्र थियो, त्यहाँ निर्मित महलों र सार्वजनिक भवन थिए। तर रोम को पतन र यो लिइरहेको आदिवासीहरूले पछि लगभग सबै पुरातन भवन नष्ट थिए।
अस्वीकार र जागृति
Oddly पर्याप्त, पनि सामा संग पुनर्जागरण Palatine overgrown मा। केवल XVII सताब्दी मा, भूमि पोप परिवार Farnese प्राप्त। यसको भूदृश्य, र पनि एक धनी विला निर्माण, तर यो स्थानको इतिहास wraps अन्तर्गत रह्यो। को उन्नाइसौँ शताब्दीमा सम्म पहाडी मा रूखहरू थिए र Farnese उद्यान राख्नुभयो। मात्र v1861, फ्रान्सेली सम्राट् नेपोलियन III रोमी सरकारबाट देशमा किनेको गर्दा, त्यो पहाडी मा उत्खनन गरिरहेको archaeologists चार्ज। प्राचीन भवन को रहलपहल देखि फेला परेन। त्यतिबेलादेखि हिल भएको दरबार (घर) को पर्याय विभिन्न भाषामा नाम भयो।
यो Palatine जस्तो
प्राचीन रोम, यस पहाडी पनि revered र पवित्र मानिन्छ। त्यहाँ उनले-ब्वाँसो प्रसिद्ध जोडाहरू स्याहारसुसार जहाँ एक पवित्र गुफा, र जो अन्तर्गत शिशुहरू संग टोकरी फेला परेन रूख थिए। पनि चौथो शताब्दी मा, त्यसपछि यात्री फरक आकर्षण देखाए। उदाहरणका लागि, पाल, Faustulus Romulus र REM, घर जोडाहरू को एक, एक वेदी स्टेटर पान र बृहस्पति को मन्दिर खडा जहाँ। धेरै अवशेषहरूको पनि थिए। को Aventine पहाडी संग Romulus द्वारा हालियो भाला बाहिर वृद्धि जो यस thorns, र हर्कुलेसक्लस्टर एक डाकू संग लडे जहाँ रक, जो, साथै यो कमाल को सम्मान हुर्केका एक स्मारक। उहाँले Palatine र मूल प्राचीन थियो "जोडाहरू संग्रहालय।" यसलाई "Curia Saliev" भनिन्थ्यो। त्यहाँ पहिलो रोमन augur रूपमा Romulus को छड, साथै 12 चिरपरिचित बोर्डहरू मंगल राखिएको थियो। जो यो थियो, तर archaeologists हिल thousandth ई.पू. देखि Inhabited थियो भन्ने विश्वास गर्छन्। पोर्ट र Romanula - - उत्तरी र पश्चिम मा पौराणिक जोडिएको शहर को दिन दुई ढोकाहरू एक पर्खाल घेरिएको थियो। नाङ्गो केटाहरू हिल वरिपरि चलिरहेको बेला Lupercalia, - यो पनि एक रहस्यमय प्राचीन पर्व सञ्चालन।
को Palatine को महलों
महान् रोम अधिक बिरुवाहरु हिल मा देखा, भयो। पछि उहाँले प्राचीन करिश्मा र पवित्रता गरेर धनी, aristocrats र महत मान्छे घेरिएको, र मुख्य रूप यहाँ बसे थियो। तसर्थ, हाम्रो युग को शुरुवात रूपमा प्रारम्भिक रूपमा रोम मा Palatine महलों अप निर्माण गरिएको छ। यहाँ भविष्यमा सम्राट अगस्तस त्यसपछि घर आफ्नो परिवार बनाइएको थियो जन्मिएको थियो, र। उहाँले संगमरमर बनेको हिल को बीचमा, यो बनाए। यो दरबार अपोलो र Vesta मन्दिर सबै पक्ष बाट घेरिएको थियो। यो धनी घरको आगो समयमा तल जलाए, तर बढि शानदार फारम पुनर्निर्माण गरियो। यसलाई Propylene र दरबार र मन्दिरको अपोलो erected colonnade मूर्तिहरूले बीच संलग्न थियो। एक घर र लिबिया, अगस्तस को पत्नी पनि थियो। को Palatine मा आफूलाई महलों र यस्तो टाइबेरियसलाई, Caligula, Domitian र उत्तर अन्य emperors, बनाए। तिनीहरू सबै भिन्न थिए। को कैपिटल हिल संग Caligula दरबारमा सँगै एक विशेष निर्मित पुल। Domitian आफूलाई सबैभन्दा शानदार र परिष्कृत घर बनाए। त्यहाँ फोहराहरू स्तम्भहरू, Basilica, यस्तो बृहस्पति, सिंहासन कक्ष र दर्शक लागि कोठा रूपमा देवताहरूको, समर्पित थिए। सम्राट्लाई अक्सर परिषद को भ्रमण सत्र आयोजित, र पर्यटकहरूलाई प्राप्त त्यहाँ। आफ्नो दरबारमा अर्को Domitian उहाँले प्रतियोगिता अवलोकन गर्न जहाँ एक स्टेडियम, र ओछ्यानमा, निर्माण, आफ्नो Chambers जडान गरिएको थियो। राजमहलको उत्तर एक सात तले थियो र पहाडी को खुट्टा मा स्थित।
को Palatine मा धार्मिक भवन
मन्दिर प्राचीन यहाँ लामो समय निर्माण गरेका थिए। तर झूटो धर्मका देवताहरूका लागि समर्पित सुविधाहरु को अब धेरै, महान् आमा Cybele, अपोलो र धेरै अन्य भग्नावशेष वेदी मात्र remnants हाम्रो पटक तल आउनुहोस्। सबैभन्दा तिनीहरूलाई बीच प्रसिद्ध - यो प्रेरित पावलले उल्लेख अज्ञात परमेश्वरको वेदी छ। यो 1820 मा फेला परेन। तर प्रारम्भिक, Palatine रोममा मध्ययुगीन र पुनर्जागरण मसीही मण्डलीहरू धेरै राखिएको छ। सबै भन्दा प्रसिद्ध - एक मन्दिर छ सेन्ट सेबस्टियन को र Bonaventure, Teodoro र Anastasia। पछिल्लो चर्च - सबैभन्दा रोचक एक। यो रूपमा प्रारम्भिक चौथो शताब्दीमा रूपमा पहाडी को खुट्टा मा बनाइएको थियो। कम से कम, यो समय देखि आफ्नो मोशाको मिति। यस पुनर्जागरण मा, यो माथि यो तथाकथित Florentine घरको छानो मा बनाइएको थियो। धेरै पुरानो र मसीही शहीदहरूको एक समर्पित सेन्ट Anastasia को Basilica। तर यो विशेष गरी सत्रौँ शताब्दीमा, rearrangements एक पछि एक आधुनिक नजर प्राप्त।
यो पहाडी मंच र Circo Massimo (रेसकोर्स) बीच, शहर को दिल मा स्थित छ। त्यसैले, तपाईं प्राचीन रोम को स्मारक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, Palatine आफ्नो बाटो मा सही हुनेछ। त्यहाँ मार्फत डे संत Gregorio पक्षमा सडक बस Constantine को कट्टर पछि, हुन सक्छ प्रविष्ट गर्नुहोस्। को मेट्रो प्रयोग गरेर यो स्थान प्राप्त गर्न सजिलो तरिका हो। यो गर्न, लाइन बी लिन र "Colosseo" स्टेशन मा बन्द प्राप्त। त्यसपछि तपाईं एक सानो पैदल आवश्यक छ।
हिल को यात्रा
कसरी हाम्रो समय मा, रोम मा Palatine गर्छ? अहिले यो एक विशाल पुरातात्विक आरक्षित छ। तपाईं पुरातन शहर को सम्पूर्ण इतिहास हुनेछ। तथापि, अगस्त मा महल बाट यो केवल जग रहिरहे तर लिबिया घरमा frescoes छ। Caligula को दरबार को धेरै व्यापक र प्रभावशाली भग्नावशेष। केही शताब्दीपछि पहिले भङ्ग हरियो Farnese उद्यान अझै पहाडी केन्द्र, मा। मूर्तिहरू को टुकडे, साथै आधुनिक मूर्तिकला - Domitian को दरबार नजिकै स्टेडियम पुरातात्विक भेट्टाउनेछन् प्रदर्शन। धेरै मूल्यवान कलाकृतिहरू पनि Palatine संग्रहालय सारियो। यो आवश्यक जाँच्न पर्छ। यो मठ सिर्जना गरियो, र पहाडी को शीर्ष मा स्थित छ। रोम (Palatine) पुरातन स्मारक को रंगीन फोटो प्रत्याभूति छन्। खैर, हिल नै पनि एक विशाल खुला हावामा संग्रहालय छ। यो आधा पछिल्लो छ साँझ सम्म आठ बिहान काम गर्छ। टिकट 3.20 यूरो खर्च। तपाईं Palatine र Colosseum एउटा यात्रा संयोजन भने, यो तपाईं 8 जेई खर्च हुनेछ टिकट तीतस को आर्क मा खरिद गर्न सकिन्छ। यो खरिद समय देखि 24 घण्टा संचालित।
रोम मा Palatine: समीक्षा
मानिसहरू मौसम र वर्ष को समय बिना यहाँ आउनुहोस्। पर्यटकहरु को प्रशस्त भए तापनि शहर को दिल मा यो पहाडी यात्री पूर्व महानता र महिमा को remnants हेर्न मात्र छैन, तर पनि जीवनको impermanence मनन गर्न मौका प्रदान गर्दछ शान्त ठाउँ छ। सोही, मान्नेहरूले र honeymooners, रोम मा विशेष गरी लोकप्रिय Palatine बीचमा। यसको आकर्षण को पृष्ठभूमिमा फोटो निरन्तर विवाह समयमा गरिरहेका छन्। हिल को शीर्ष साथै रोम को एक सुन्दर दृश्य प्रदान गर्दछ, र तपाईं ठूलो दृश्यहरू बनाउन सक्छ। धेरै पर्यटकहरु मात्र पुरातन भग्नावशेष र ऐतिहासिक स्थलहरूको लागि यहाँ आएको, तर पनि सुन्तले रङ बगीचहरुमा हिंड्न Farnese र सिट्रस को अद्भुत सुगन्ध आनन्द।
साराटोभ को जनसंख्या। साराटोभ को जनसंख्याको संख्या
यो पास गेट Baidar
इटाली मा सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ: एक सिंहावलोकन, वर्णन र रोचक तथ्य
आरक्षित "डंडे" (क्रास्नायार्स्क)
राजमार्ग। राजमार्ग रूस
मध्ययुगीन वस्त्र (फोटो)। मध्ययुगीन gothic लुगा
छनौट गर्न स्ट्रबेरी जाम नुस्खा
के कटलरी को ट्रे गर्छ?
मित्र कसरी पाउन? तपाईं केवल मित्र बन्न आवश्यक
पोर्ट Temryuk: इतिहास, स्थान
Probing - यो गर्नुपर्छ ... तयारी र सञ्चालन
साइट विकासको लागि सन्दर्भको सर्त
मैनीक्योर कालो र सुन। आधुनिक रंग मा नङ। विचार र सुविधाहरू
आफ्नो वास्तविक भाइ देखि गलत boletus कसरी भेद गर्न?
नोकिया 2600: विशेषताहरु र निर्दिष्टीकरण
कोचिंग के हो?
व्यक्तिगतको सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति र भूमिकाको सम्बन्ध।